Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Dr. Saadiq Eenow - Qaybta: 2aad
SOMALITALK.COM | Dr. SAADIQ EENOW
Taariikhdaada marka aad taqaanid ayaad hore u socon kastaa....
SomaliTalk.com | August 1, 2010
Sidii aan ku soo aragnay qormadii hore, Dadka Soomaalidu waxay leeyihiin taariikh filweyn/ da'weyn oo guun ah. Laakiin nasiib darro taariikhdaas waxay ka mid tahay waxyaalaha la inaga bililiqaystay. Waa hantida aynaan war u hayn oo haddii ogaalkeedu nagu badnan lahaa oo aan taariikhdaas hayn lahayn waxaan ka badbaadi lahayn wax badan ama khilaaf dadkeena ku dhacay. Taariikhdu maadaama ay tahay tagto sidii ay dhacday loo soo guuriyey, waxay noqon kartaa taariikh dhaqaale, taariikh dagaal iyo dhacdooyin oo loo soo weriyey sidii ay ahaayeen oo aan laga been sheegin.
Taariikhdii hore ee Soomaalida, oo ka horeysey taariikhda qoran (pre-history), waxay Soomaalidu kala mid yihiin bini'aadamka kale. Waana taariikh inta badan lagu ogaado baaritaan lagu sameeyo xagga aaladahdii ay dadkii hore adeegsan jireen iyo baritaano lagu sameeyo lafo hore oo laga helo dhulka oo la qiyaaso xilligi dadkii hore halkaas ku noolaayeen, waxaana baaritaanka noocaas ah lagu qiyaasaa xilligaa meeshaas lagu noolaan jirey iyo qaabkii dadkii halkaas degana ay u noolaayeen - cilmigaas oo loo yaqaan arkiyooloji (archaeology).
Baaritaano lagu sameeyay taariikhdii hore waxay muujinayaan in geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalidu degto ay yihiin meelihii ugu horeeyey ee bini-aadamku deganaayeen, kana soo farcameen. Taariikh yahano ayaa aaminsan in taariikhdii hore ee Soomaaliya la ogaado ay "dan u tahay bini'aadamka oo dhan," waayo waa dad aad u da'weyn.
Taariikhdu waxay xustaa in xiriir xoog leh uu dhexeeyey Soomaalida iyo faraacinadii hore ee Masar. Boqorkii ugu horeeyey ee safaradiisu yimaadeen Soomaaliya waxa lagu tilmaamaa Khufu (2589 - 2566 BC). Taariikhdu waxay xustaa wiil uu dhalay Khufu in doonni uu watey uu la socdey nin Soomaali ah oo magaciisu ahaa HORTIISA, waxaana oo loo malaynayaa in ninkaas Soomaaliga ahi uu ahaa dal yaqaan tusayey Soomaaliya.
Faracinadii dambe aad ayey xiriir ula soo sameeyey Soomaaliya, gaar ahaan xiriir ganacsi. Waxaa ugu caansanaa boqoraddii Hatshepsut (1508�1458 BC) oo xiriir weyn la soo yeelatay Soomaaliya. Waxaa taariikhda si xoog weyn ugu xusan, isla markaana ay faraacinadii ku asteen ama ku sawireen ahraamtooda, in safar xoog weyn ay boqoraddaasi u soo dirtay Soomaaliya. Doonyihii ay soo dirtay (oo lagu qiyaaso lix doonyood) markii ay soo gaareen Soomaaliya si weyn ayaa loo soo dhaweeyey, waana la marti sooray, waxaana doonyihii loogu raray shixnad qaali ah iyo hadiyado looga buuxiyey doonyihii.
Markii safarkaasi ka laabtay Soomaaliya oo gaaray Masar waxay boqoradii tiri "Waxaad ka timaadeen dhulkii aabayaal iyo awoowayaal." Hadalkaas oo loo daliishado in xadaaradii ka asaasantay dhulkii Masaaridii hore ay asal ahaan ka soo jeedo Soomaaliya. Waxaa taariikhdu mujinaysaa in ilbaxnimadii hore ee Masaaradii ay asal ahaan ka sooo jeedaan dhulka geeska Afrika ee Soomaalidu degto, halkaas oo ay kala tageen ilbaxnimo iyo xadaarad. Waa nasiib darro ah in taariikhdaasi ka qarsoon tahay Soomaalida, oo Soomaalidu ay yihiin dad taariikh dheer.
Buugga Pharaohs, fellahs and explorers oo la qoray 1892 oo ka warbixinayey safarkii ay boqoradii Hatshepsut ugu dirtay Soomaaliya ayaa qoray sidan: "Dhacdadaadaasi waxay ahayd in la sameeyey xayn maraakiib ah oo mari kara badda, waxaana loo diray dhulkii Punt; dhulkaas oo Maspero iyo Mariette ku asteeyeen in uu yahay qayb ka mida dalka Soomaaliya oo ku yaal dhanka bari ee xeebta Afrika oo xuduud la leh Gacanka Cadan. Dhulkaas oo qani ku ah dhirta beeyaha (fooxa), xabagta qaaliga ah, mayraxda, dahabka, fool-maroodiga iyo alwaax qaali ah; waa dhulka loogu yeero dhulkii qorfaha.
Qarnigii 8aad Nebi Ciise hortiis ayaa xadaaradii waxay ka wareegtey Faraacinadii, waxayna u wareegtey Giriiggii hore (Greek) oo xadaaraddiisu jirtey intii u dhaxaysay (750 - 149 BC waa ka hor dhalashii nabi Ciise calayhi salaam). Dadkii magaca lahaa ee u kacay Giriiggii hore waxaa ka mid ahaa Aristotle oo cilmi xoog leh ku kordhiyey xadaaradii Giriigii hore. Waxaana xilligaas ay Giriiggu gali jireen dagaallo farabadan.
Waagii hore dabaylaha lagu kala goosho badda ee loo yaqaan Maansoonka (Monsoon) waxaa aqoon jirey Carabta keliya iyaga oo ka faa'iidaysanaya dabaylahaas ayey Carabtu ugu kala safri jireen Afrika iyo bariga fog, waxayna u ahayd sir ay qarsan jirey oo aanay cid kale u sheegi jirin. Waxaa dhacday in nin ganacsade ah oo Giriig ah oo soo gaarey Badweynta Hindiya uu ogaadey in dadkaasi kafaa'iidaystaan dabaylaha. Ninkii markii uu ku noqday Giriigga ayuu fashiliyey sirtii Carabta ee dabaysha Monsoon-ka. Markaas ayaa Giriiggii bilaabeen in ay dabayshaas soo raacaan; waxaana markaas doonyahoodii iyo ganacsigoodii soo gaaray xeeebaha Soomaaliya oo ay xiriir la soo sameeyey Soomaalida.
Buugga taariikhdii hore ee Giriigga iyo Romanka (A history of ancient geography among the Greeks and Romans oo la qoray 1883) waxaa ku xusan in dhulka Soomaaliya loo aqoon jirey "Dhulkii Qorfaha" (Land of Sinnamon). Waxaana buuggaas oo soo xiganey buugga qadiimka ah (Periplus of the Erythraean Sea) ayaa tilmaamay dhulka Soomaaliyeed ee laga hadlayo ee laga dhoofin jirey Qorfaha in uu yahay dhulka u dhexeeya magaalada Berbera (oo looaqaan jirey Malao) iyo gacanka Gardafui ee cirifka Soomaaliya.
Buugga "The Commerce Between the Roman Empire and India" oo ku saabsan ganacsigii u dhaxeeyey boqortooyadii Roomanka iyo Hindiya waxaa ku xusan in waxyaabaha dhirta ka soo baxa ee loo iib geyn jirey Roomanka u soo mari jireen Soomaaliya iyo Carabta. Taas oo Soomaalida iyo Carabtu isku qiime kaga iibin jireen Roomanka. Ganacsigaas oo la tilmamay in Roomanku ay si isku mid ah ganacsi ula lahaayeen Soomaalida iyo Carabta. Tusaale waxaa loo soo qaataa alaabadii halkaas laga keeni jirey sida: Mayraxda iyo Fooxa oo Soomaalida iyo Carabtu isku qiime iibin jireen.
Dr. Saadiq Enow, waa taariikhyahan, qoraa, dhakhtar iyo macallin Soomaaliyeed. Waxaana lagala xiriiri karaa Email: enow2@hotmail.com
Faafin: SomaliTalk.com | August 1, 2010